काठमाडौं । तनँहु रुपाकोटकी ३८ वर्षीया दिलमाया गुरूङको पहिलो श्रीमानसँग २०१८ मा डिभोर्स भयो । डिभोर्स अघि नै दिलमायाको दिल पोखराका सन्जीव गुरूङतिर नजिकिन पुग्यो । दुई बच्चाकी आमा दिलमाया र सन्जीव २०१४ देखि नै एक अर्काको अफेयरमा थिए । २०१८ मा पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेसँगै दिलमाया सन्जीवको पत्नि बन्न पुगिन् ।भारतीय आर्मीमा कार्यरत पोखरा–१३ अन्नपूर्णमार्ग घर भएका सन्जीव दिलमायासँग विहे गर्न तयार भए । डिभोर्स पहिला नै शारीरिक सम्बन्ध रहेका कारण दिलमायाले सन्जीवलाई पेटमा बच्चा रहेको जानकारी गराईन् । उक्त जानकारी पाएपछि सन्जीव खुशी बने । र उनले दिलमायालाई भने ‘बच्चालाई म स्वीकार गर्छु ।’उनीहरू बच्चालाई खुला संसार देखाउन आतुर थिए । त्यहीबीचमा दिलमायाले जालझेल गर्न थालिन् । सन्जीव आफ्नो कार्य क्षेत्र सिलानेमा रहँदा दिलमायाले बच्चा भएको जानकारी गराइन् । त्यसपछि उनी घर आए । घर पुगेपछि उनले बच्चा खोज्न थाले । दिलमायाले तीन वर्षदेखि श्रीमान, सासु ससुरा तथा घर परिवारलाई आफ्नो बच्चा रहेको जानकारी गराउँदै आइन् ।[caption id="attachment_102661" align="alignnone" width="2000"] दिलमाया गुरूङले आत्महत्या गरेपछि मुचुल्का उठाउँदै प्रहरी । तस्बिरः कृष्णसिंह धामी ।[/caption]त्योबीचमा सन्जीवले पनि बच्चालाई लिएर आउँ म घरमा राख्छु भन्दै आए । तर दिलमायाले कहिले काठमाडौं होस्टेलमा राखेकी छुँ भन्न थालिन्, कहिल्यै कतै राखेको भनेर वाहना बनाउन थालिन् । उक्त बाहना विगत ३/४ वर्षदेखि चल्दै आयो । ढाट्ने काम धेरै भएपछि पोखराबाट सासु ससुरा तथा श्रीमान नै काठमाडौं आएर ‘बच्चा कता छ ? हामीलाई देखाउँ’ भने ।केहि दिन अगाडि काठमाडौंको सुन्धारास्थित नागराज होटलको चौथो तलाको रुम नम्बर ४०२ मा बसे । त्यहाँ पनि श्रीमान, सासु ससुरा तीनै जना मिलेर ‘खै त बच्चा’ भने । बच्चा देखाउन नसकेपछि उनले चौथो तलाको झ्यालबाट हाम फालेर आफ्नो प्राण नै त्याग गरिन् । शनिवार बिहान साढे आठ बजेतिर दिलमायाले आत्महत्या गरेकी हुन् ।आत्महत्यापछि दिलमायाका माइतिपक्ष र घर परिवारबीच छलफल गराईएको महानगरीय प्रहरी वृत जनसेवाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी बासुदेव खतिवडाले जानकारी दिए । ‘बच्चा देखाउने भन्दै विगत लामो समयदेखि ढाट्दै आएको देखिन्छ । अन्ततः बच्चा देखाउन नसक्दा आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।’ डिएसपी खतिवडाले भने ।[caption id="attachment_102662" align="alignnone" width="2000"] दिलमाया गुरूङले आत्महत्या गरेको सुन्धारास्थित नागराज होटल । तस्बिरः कृष्णसिंह धामी ।[/caption]चार तलाबाट हाम फाल्दा दिलमायाको टाउँको फुटेको छ । टाउँकोबाट रगत समेत बगेको छ भने शरिरका अन्य भागमा सामान्य चोट लागेको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनले एकाएक झ्याल खोलिन र हाम फालिन् । सँगैको अर्को होटलमा बस्दै आएका एक व्यक्तिका अनुसार उनी भूईमा बजारिँदा मोटरसाइकलले कसैलाई ठक्कर दिएजस्तो चर्को आवाज आएको थियो ।उनी चर्को स्वरले कराएकी थिइन् । सवारी दुर्घटना भएछ कि भन्दै हेर्न बाहिर आएका उनीहरूले सडकमा ति महिला छटपटाइरहेकी देखेका थिए । उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेसँगै हस्पिटल लैजाने तयारी गरेका थिए । तयारी पूरा नहुदैं उनले त्यही अन्तिम स्वास फेरिन् ।सन्जीवले बच्चा जसको भए पनि ‘म स्वीकार गर्छु’भन्दै आएका थिए । तर विभिन्न वाहना बनाउँदै आएकी थिईन् । सुरू देखि नै ढाट्दै आएपछि अहिले आएर आत्मग्लानी भएपछि यस्तो निर्णय पुगेको हुने सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । तर दिलमायाका घर परिवार तथा माइती पक्ष भने ‘मैले ढाट्दै आए, बच्चा छैन्’ भनेको भए पनि केही नबिग्रिने बताउँदै आएका थिए ।
३२ श्रावण २०७६, शनिबार १५:४७
काठमाडौं । तनँहु रुपाकोटकी ३८ वर्षीया दिलमाया गुरूङको पहिलो श्रीमानसँग २०१८ मा डिभोर्स भयो । डिभोर्स अघि नै दिलमायाको दिल पोखराका सन्जीव गुरूङतिर नजिकिन पुग्यो । दुई बच्चाकी आमा दिलमाया र सन्जीव २०१४ देखि नै एक अर्काको अफेयरमा थिए । २०१८ मा पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेसँगै दिलमाया सन्जीवको पत्नि बन्न पुगिन् ।
भारतीय आर्मीमा कार्यरत पोखरा–१३ अन्नपूर्णमार्ग घर भएका सन्जीव दिलमायासँग विहे गर्न तयार भए । डिभोर्स पहिला नै शारीरिक सम्बन्ध रहेका कारण दिलमायाले सन्जीवलाई पेटमा बच्चा रहेको जानकारी गराईन् । उक्त जानकारी पाएपछि सन्जीव खुशी बने । र उनले दिलमायालाई भने ‘बच्चालाई म स्वीकार गर्छु ।’
दिलमाया गुरूङले आत्महत्या गरेपछि मुचुल्का उठाउँदै प्रहरी । तस्बिरः कृष्णसिंह धामी ।
त्योबीचमा सन्जीवले पनि बच्चालाई लिएर आउँ म घरमा राख्छु भन्दै आए । तर दिलमायाले कहिले काठमाडौं होस्टेलमा राखेकी छुँ भन्न थालिन्, कहिल्यै कतै राखेको भनेर वाहना बनाउन थालिन् । उक्त बाहना विगत ३/४ वर्षदेखि चल्दै आयो । ढाट्ने काम धेरै भएपछि पोखराबाट सासु ससुरा तथा श्रीमान नै काठमाडौं आएर ‘बच्चा कता छ ? हामीलाई देखाउँ’ भने ।
केहि दिन अगाडि काठमाडौंको सुन्धारास्थित नागराज होटलको चौथो तलाको रुम नम्बर ४०२ मा बसे । त्यहाँ पनि श्रीमान, सासु ससुरा तीनै जना मिलेर ‘खै त बच्चा’ भने । बच्चा देखाउन नसकेपछि उनले चौथो तलाको झ्यालबाट हाम फालेर आफ्नो प्राण नै त्याग गरिन् । शनिवार बिहान साढे आठ बजेतिर दिलमायाले आत्महत्या गरेकी हुन् ।
आत्महत्यापछि दिलमायाका माइतिपक्ष र घर परिवारबीच छलफल गराईएको महानगरीय प्रहरी वृत जनसेवाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी बासुदेव खतिवडाले जानकारी दिए । ‘बच्चा देखाउने भन्दै विगत लामो समयदेखि ढाट्दै आएको देखिन्छ । अन्ततः बच्चा देखाउन नसक्दा आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।’ डिएसपी खतिवडाले भने ।
दिलमाया गुरूङले आत्महत्या गरेको सुन्धारास्थित नागराज होटल । तस्बिरः कृष्णसिंह धामी ।
चार तलाबाट हाम फाल्दा दिलमायाको टाउँको फुटेको छ । टाउँकोबाट रगत समेत बगेको छ भने शरिरका अन्य भागमा सामान्य चोट लागेको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनले एकाएक झ्याल खोलिन र हाम फालिन् । सँगैको अर्को होटलमा बस्दै आएका एक व्यक्तिका अनुसार उनी भूईमा बजारिँदा मोटरसाइकलले कसैलाई ठक्कर दिएजस्तो चर्को आवाज आएको थियो ।
उनी चर्को स्वरले कराएकी थिइन् । सवारी दुर्घटना भएछ कि भन्दै हेर्न बाहिर आएका उनीहरूले सडकमा ति महिला छटपटाइरहेकी देखेका थिए । उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेसँगै हस्पिटल लैजाने तयारी गरेका थिए । तयारी पूरा नहुदैं उनले त्यही अन्तिम स्वास फेरिन् ।
सन्जीवले बच्चा जसको भए पनि ‘म स्वीकार गर्छु’भन्दै आएका थिए । तर विभिन्न वाहना बनाउँदै आएकी थिईन् । सुरू देखि नै ढाट्दै आएपछि अहिले आएर आत्मग्लानी भएपछि यस्तो निर्णय पुगेको हुने सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । तर दिलमायाका घर परिवार तथा माइती पक्ष भने ‘मैले ढाट्दै आए, बच्चा छैन्’ भनेको भए पनि केही नबिग्रिने बताउँदै आएका थिए ।
आत्महत्या, दिलमाया गुरूङ
Prevएउटा अनौठो संयोगले टर्‍यो ठूलो दुर्घटना (भिडियोसहित)
रवि लामिछानेको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन, एसपीलाई वर्खास्त गर्न मागNext